Ukucevuza kwenza kuhlalwe ema-clinic | News24
Ukucevuza kwenza kuhlalwe ema-clinic
MHLELI: Ngithi akengiphawule nganantu udaba olungiphethe kabi emoyeni. Ziyaqhubeka nokwanda izinkinga emithola-mpilo engivamise ukuwahambela uma ngingaphilile.
Ave kubuhlungu ukuhlala isikhathi eside emthola-mpilo, ulinde usizo lokwelashwa kodwa ungalutholi ngendlela obuyilindele. Lapha ngibala inkinga yabahlengikazi yokungasheshi noma ukungqali ukusebenza ngesikhathi. Kungani abahlengikazi behlezi bezixoxela izindaba zabo ekubeni iziguli zigcwele phama endlini, zingasizwa ngalutho? Inkinga yokungena kwesiguli egunjini labagulayo cishe isikhathi esilinganiselwa emizuzwini engu-35 singaphumi.
Anginayo nencane inkinga ngomabhalane ngoba bayakwenza okumela bakwenze. Cha impela ngigculiseka kahle kakhulu ngabo.
Enye yezinkinga kubahlengikazi eyenza ukuthi izinto zihambe kancane yikho ukungafundiseki kahle kangangoba abanye babo bahlulwa ngisho nawukubhala kahle. Umuntu abhale sengathi ingane eyoqala ukufunda enkulisa! Kuzomele bakwazi ukufunda kahle.Nami angifundile nje njengoba ngazigcinela kwafesitiye kodwa angibhali kabi ngaleyo ndlela. Omunye engingeke ngilisho igama lalo lathi kimi: “awusho bhuti konjwe libhalwa kanjani igama elithi department”. Angibanga nenkinga, nampelela.
Kuningi okumele kwenziwe uMnyango wezeMpilo uma kusenje. Angeke ngikuthole ukuphumula ngalezi zinkinga.